OTU ESI ELELE ỌSỌ NKE SSD - WINDOWS - 2019
Otu esi elele ọsọ nke SSD
Ọ bụrụ na, mgbe ị zụrụ ụgbọala siri ike, ị chọrọ ịma otú ọ dị ngwa, ị nwere ike ime ya na mmemme ndị dị mfe na-enye gị ohere ịlele ọsọ nke ụgbọala SSD. Isiokwu a bụ maka ọrụ iji chọpụta ọsọ nke SSDs, banyere ihe nọmba dị iche iche pụtara na nyocha ule na ozi ndị ọzọ nwere ike ịba uru.
N'agbanyeghị na e nwere usoro dị iche iche iji nyochaa arụmọrụ disk, n'ọtụtụ ọnọdụ mgbe ọ na-abịa SSD ọsọ, nke mbụ na ha na-eji CrystalDiskMark, a na-enye n'efu, dị mfe na dị mfe na interface asụsụ Russian. Ya mere, nke mbụ, m ga-elekwasị anya na ngwá ọrụ a iji tụọ ọsọ ọsọ / ịgụ ihe, mgbe ahụ, m ga-emetụ nhọrọ ndị ọzọ dịnụ. Ọ pụkwara ịba uru: Nke SSD ka mma - MLC, TLC ma ọ bụ QLC, Ịtọ SSD maka Windows 10, Ịlele SSDs maka njehie.
Ilele ọsọ nke SSD na CrystalDiskMark
Nnwale na nyocha ọsọ
Download CrystalDiskMark, usoro mmemme
Ngwa SSD Speed ​​Assessment Software
Ilele ọsọ nke ụgbọala SSD na CrystalDiskMark
Mgbe mgbe, mgbe ị na-ahụ nyochaa nke SSD, nseta ihuenyo site na CrystalDiskMark gosipụtara na ozi ya banyere ọsọ ya - n'agbanyeghị na ọ dị mfe, uru a bara uru bụ ụdị "ọkọlọtọ" maka ule dị otú ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ (gụnyere na ntule ndị ọkachamara) usoro nyocha na CDM dị ka:
Jaaa ọrụ ahụ, họrọ ụgbọala ka a nwalee gị n'ọdụ aka nri. Tupu nzọụkwụ nke abụọ, ọ bụ ihe na-achọsi ike imechi mmemme niile nwere ike iji arụmọrụ rụọ ọrụ na ịnweta disk.
Pịa bọtịnụ "niile" iji mee ihe nlele niile. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji chọpụta arụmọrụ disk na arụmọrụ ụfọdụ ederede, ọ bụ iji pịa bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (a ga-akọwa ha n'ọdịnihu).
Na-eche maka njedebe nke ule ahụ ma nata ihe nyocha nke SSD maka arụmọrụ dị iche iche.
Maka ule nke bụ isi, ihe nyocha ndị ọzọ anaghị agbanwe agbanwe. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịba uru ịmara ihe a ga-ahazi n'usoro ihe omume ahụ, na ihe kpọmkwem nọmba dị iche iche na-apụta na nlele elele anya.
Na isi CrystalDiskMark window, ị nwere ike ịhazi (ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ novice, ị nwere ike ọ gaghị adị mkpa ịgbanwe ihe ọ bụla):
Ọnụ ọgụgụ nke ego nlekota (nsonaazụ bụ ụda). Site na ndabara - 5. Mgbe ụfọdụ, iji mee ka ule ahụ ọsọ ọsọ belata ruo 3.
Ogo faịlụ ahụ nke arụmọrụ ga-arụ n'oge ịṅomi (site na ndabara - 1 GB). Ihe omume a na-egosi 1GiB, ọ bụghị 1Gb, ebe anyị na-ekwu maka gigabytes na usoro ọnụọgụ ọnụọgụ (1024 MB), ọ bụghị n'ọtụtụ nchịkwa ugboro ugboro (1000 MB).
Dika ekwuru ya, ị nwere ike ịhọrọ ụdị disk a ga-enyocha. Ọ gaghị adị SSD, na otu usoro ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta ọsọ nke ọkụ mbanye, kaadị nchekwa ma ọ bụ diski ike mgbe niile. Ule a na-enweta na nseta ihuenyo dị n'okpuru ebe a nwetara maka diski RAM.
Na mpaghara nhazi "Ntọala" ị nwere ike ịgbanwe ntinye ọzọ, ma, ọzọ: M ga-ahapụ ya dị ka ọ dị, ọ ga-adị mfe iji tụnyere ihe ngosi ọsọ gị na nsonaazụ ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ha na-eji nkwụsị ndabara.
Ụkpụrụ nke nsonaazụ ọsọ ọsọ
Maka ule ọ bụla a rụrụ, CrystalDiskMark na-egosiputa ozi ma megabytes kwa nkeji na arụmọrụ kwa ụbọchị (IOPS). Iji chọpụta nọmba nke abụọ, jigide mainter pointer n'ihi nsonaazụ ọ bụla, data data IOPS ga-apụta na mpụta ngwa ngwa.
Na ndabara, usoro kachasị ọhụrụ nke usoro ihe omume ahụ (onye gara aga nwere ọkwa dị iche) na-eme nlele ndị a:
Seq Q32T1 - Dezie ederede / gụọ na njụ-ajụjụ ntanye nke 32 (Q), na 1 (T) iyi. Na ule a, ọsọ na-abụkarị ọkwa kasị elu, ebe ọ bụ na edere faịlụ ahụ na mpaghara diski dị iche iche dị na mpaghara. Nsonaazụ a egosipụtaghị ezigbo ọsọ nke SSD mgbe ejiri ya na ọnọdụ dị adị, ma ana-emekarị ya.
4KB Q8T8 - Ideghari ederede / gụọ na random ndị nke 4 Kb, 8 - rịọ ọdụ, 8 iyi.
Ihe nyocha nke 3 na nke anọ dị ka nke gara aga, ma na ọnụọgụ dị iche iche nke eri na omimi nke ọdụ ụgbọelu.
Nchọpụta nhụjuanya ajụjụ - ọnụ ọgụgụ nke ederede ederede na-ezigara onye na-achịkwa ụgbọala ahụ n'otu oge; iyi na mpaghara a (ha abụghị na nsụgharị nke usoro ihe omume) - ọnụ ọgụgụ nke faịlụ na-edekọ iyi ndị usoro ahụ malitere. Nhọrọ dịgasị iche n'ime nyocha ikpeazụ gara aga na-eme ka anyị nyochaa otú onye nchịkwa disk si "na-ejide" site n'ịgụ na ide data na ọnọdụ dị iche iche ma na-achịkwa nkesa nke ihe onwunwe, ọ bụghị naanị ọsọ ya na MB / sec, kamakwa IOPS, nke dị mkpa ebe a. site na oke.
Ọtụtụ mgbe, ihe ga-esi na ya pụta nwere ike ịgbanwe nke ọma mgbe ịkwalite SSD firmware. O kwesịkwara iburu n'uche na site n'ule ndị dị otú ahụ, ọ bụghị nanị na disk dị na ya, kamakwa CPU, ya bụ. Nsonaazụ nwere ike ịdabere na njirimara ya. Nke a dị oke elu, ma ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịchọta nyocha zuru ezu gbasara arụmọrụ nke disks na omimi nke ọdụ ụgbọelu ahụ na Intanet.
Download CrystalDiskMark na malite ozi
Ịnwere ike ibudata nsụgharị ọhụrụ nke CrystalDiskMark si na saịtị ahụ na saịtị //crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark/ (Jikọtara na Windows 10, 8.1, Windows 7 na XP.) Usoro a nwere Russian n'agbanyeghị na saịtị ahụ dị na Bekee). Na peeji nke, uru dị ma dị ka onye nhazi na dịka ebe nchekwa zip, nke na-anaghị achọ nkwụnye na kọmputa.
Rịba ama na mgbe ị na-eji mbipute a na-ebigharị, ọ nwere ike ịnweta ahụhụ na ngosipụta nke interface ahụ. Ọ bụrụ na ịchọta ya, mepee ihe ndekọ archive sitere na CrystalDiskMark, lelee igbe "Unlock" na "General" taabụ, tinye ntọala ma weghachite ebe nchekwa ahụ. Usoro nke abuo bu iji gbaa faịlụ FixUI.bat site na folda ya na archive adighi.
Mmemme Nyocha SSD nke ọzọ
CrystalDiskMark abụghị naanị ọrụ na-enye gị ohere ịchọta ọsọ nke SSD n'ọnọdụ dị iche iche. E nwere ndị ọzọ freeware ngwaọrụ:
HD Tune na AS SSD Benchmark bụ eleghị anya abụọ kachasị ewu ewu SSD ọsọ ịlele mmemme. Na-etinye aka na usoro nyocha nyocha na notebookcheck.net na mgbakwunye na CDM. Ebe nrụọrụ weebụ: http://www.hdtune.com/download.html (saịtị ahụ dị ka mbipute free na Pro nke usoro ihe omume ahụ) na http://www.alex-is.de/, karị.
DiskSpd bụ ọrụ ịbịaru iwu maka ịtụle arụmọrụ arụmọrụ. N'ezie, ọ bụ ihe ndabere nke CrystalDiskMark. Nkọwa na nbudata dị na Microsoft TechNet - //aka.ms/diskspd
PassMark bụ usoro maka ịnwale arụmọrụ nke kọmputa dị iche iche, gụnyere diski. Free maka ụbọchị 30. Na-enye gị ohere iji tụnyere ndị SSD ndị ọzọ, yana ọsọ nke ụgbọala gị tụnyere otu, nwalere site n'aka ndị ọrụ ndị ọzọ. Enwere ike ịmalite nyocha na ọkwa nke ọma site na menu nke Advanced - Disk - Drive Performance program.
UserBenchmark bụ abamuru n'efu nke na-eme ngwa na-emepụta ụdị kọmputa dị iche iche na-akpaghị aka ma na-egosiputa nsonaazụ ya na ibe weebụ, gụnyere ihe ọsọ ọsọ nke SSDs arụnyere na ntanye ha na nyocha nke ndị ọrụ ndị ọzọ.
Ngwa ọrụ nke ụfọdụ ndị na-emepụta SSD nwekwara ihe ngwaọrụ nyocha ngwaọrụ. Dịka ọmụmaatụ, na Samsung Magician ị nwere ike ịchọta ya na Ngalaba Benchmark arụmọrụ. N'elu ule a, ihe na-agụ ma na ede ede bụ ihe yiri nke ndị nwetara na CrystalDiskMark.
Na njedebe, ana m achọpụta na mgbe ị na-eji SSD emepụta 'ngwanrọ ma na-enyere' mmepe 'ọrụ dị ka Ụzọ Rapid, ị gaghị enweta ihe kpatara ya n'ule ahụ, ebe ọ bụ na teknụzụ ndị metụtara na-amalite ịrụ ọrụ - cache na RAM (nke nwere ike ibu karịa ọnụ ọgụgụ data eji maka ule) na ndị ọzọ. Ya mere, mgbe ị na-enyocha m nwere ike ikwu iji gbanyụọ ha.